ကော်တင်ဟို ကို လှမ်းခေါ်မယ့် ဂျရတ် ၊ ဗိုလ်လုပွဲနဲ့ တလှမ်းနီးသွားတဲ့ ချဲလ်ဆီး ၊ ရောင်းထုတ်နိုင်ချေရှိလာတဲ့ ဗလာဟိုဗစ် တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ - xyznews.co
ကော်တင်ဟို ကို လှမ်းခေါ်မယ့် ဂျရတ် ၊ ဗိုလ်လုပွဲနဲ့ တလှမ်းနီးသွားတဲ့ ချဲလ်ဆီး ၊ ရောင်းထုတ်နိုင်ချေရှိလာတဲ့ ဗလာဟိုဗစ် တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
အက်စတွန် ဗီလာ အသင်းဟာ ဘာစီလိုနာ ကနေ ရောင်းထုတ် လိုတဲ့ ဘရာဇီး ကွင်းလယ်လူ ဖိလစ်ပီ ကော်တင်ဟို ကို ခေါ်ယူဖို့ အတွက် ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်း ခဲ့တယ်လို့ သတင်း ထွက်ပေါ် လာခဲ့ ပါတယ် ။
ဗီလာ အသင်း နည်းပြ စတီဗင် ဂျရတ် ဟာ လီဗာပူး မှာတုန်းက ကော်တင်ဟို နဲ့ အတူ တွဲဖက် ကစားခဲ့ဖူးသူ ဖြစ်ပြီး ဘာစီလိုနာ မှာ နေရာမရ ဖြစ်နေတဲ့ ကော်တင်ဟို အတွက် ဗီလာပါ့ခ် ဟာ လွတ်မြောက်ရာလမ်း ဖြစ်လာ နိုင်တယ်လို့ သုံးသပ်မှုတွေ ထွက်လာခဲ့ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ ဟာ မိုရာတာ ကို ဇန်နဝါရီမှာ ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ အလားအလာ နည်းသွားပြီး မှာတော့ အခြား တိုက်စစ်မှူးသစ် တွေကို ပစ်မှတ်ထားဖို့ လုပ်ဆောင် ခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ် ။
ကနဦး က ဘာစီလိုနာ နဲ့ သတင်းထွက် ခဲ့တဲ့ ကာဗာနီ ကိုလည်း မန်ယူနိုက်တက် ဘက်က ဇန်နဝါရီမှာ လက်လွှတ်ဖို့ မရှိဘူးလို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
ယူဗင်တပ် နည်းပြ အယ်လီဂရီ ကတော့ ကွင်းလယ်လူ အာရွန် ရမ်ဆေး ဟာ ဇန်နဝါရီ အတွင်းမှာ အသင်းသစ် ပြောင်းရွှေ့ဖို့ ဆန္ဒ ရှိနေကြောင်း အတည်ပြု ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ရိုးမား အသင်းဟာ အာဆင်နယ် လူငယ်လေး မစ်လန်းနိုင်းလ် ကို အငှား ခေါ်ယူ နိုင်ခဲ့ကြောင်းကို ဒီကနေ့ မှာ ကြေညာ ပေးသွားဖို့ ရှိတယ်လို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
ဒါ့အပြင် ရိုးမား ဟာ ပေါ်တို ကစားသမား ဆာဂျီယို အိုလီဗီယာရာ အတွက်လည်း စုံစမ်းမှု ပြုလုပ် နေတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
မနေ့ညက ကစားခဲ့တဲ့ ကာရာဘောင် ဖလား ဆီမီး ဖိုင်နယ် ပထမ အကျော့မှာတော့ ချဲလ်ဆီး ဟာ တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါး အသင်းကို အိမ်ကွင်းမှာ ၂-၀ နဲ့ အနိုင် ကစားပြီး ဗိုလ်လုပွဲ ကို ခြေတဘက် လှမ်းလိုက် နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
စပိန် ကိုပါ ဒယ်ရေး ဖလား ပွဲမှာတော့ ရီးရဲမက်ဒရစ် နဲ့ ဘာစီလိုနာ တို့ဟာ အဝေးကွင်းတွေမှာ ၃-၁ ၊ ၂-၁ တွေနဲ့ နိုင်ပွဲ ကိုယ်စီ ရရှိ ခဲ့ကြပါတယ် ။
မန်ယူနိုက်တက် ကွင်းလယ်လူ ဂျက်ဆီ လင်ဂတ် ဟာ ဇန်နဝါရီမှာ အသင်းသစ် ပြောင်းဖို့ စီစဉ် နေတယ်လို့ သတင်း ထွက်လာခဲ့ ပါတယ် ။
စီးရီးအေ ကလပ် ဖီအိုရင်တီးနား ဟာ တိုက်စစ်မှူး ပီယာတက် ကို ဟာသာဘာလင် အသင်း ထံကနေ အငှား + အပြီးသတ် ဝယ်ယူ ပုံစံ နဲ့ ခေါ်ယူ နိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်တယ်လို့ မနေ့ညက သတင်းထွက်လာခဲ့ ပါတယ် ။
ဒီလိုမျိုး ပီယာတက် ကို ခေါ်ယူ လိုက်တာဟာ အာဆင်နယ် က စိတ်ဝင်စား နေတဲ့ တိုက်စစ်မှူး ဒူဆန် ဗလာဟိုဗစ် ကို ရောင်းထုတ်ဖို့လား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေဟာလည်း ပေါ်ထွက် လာစေခဲ့ ပါတယ် ။
PSG တိုက်စစ်မှူး လီယွန်နယ် မက်ဆီ ဟာ ကိုဗစ် ဆေးစစ်မှု မှာ ပိုးမရှိတော့ကြောင်း တွေ့ရှိ ရတာကြောင့် ပြင်သစ် ကို ပြန်လာ နိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။
မက်ဆီ ဟာ မနေ့က ကိုယ်ပိုင် ဂျက်လေယာဉ် နဲ့ ပဲရစ် ကို ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ သတင်း ရရှိ ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အမျိုးသမီး အသင်းနဲ့ ဝက်စ်ဟမ်း အမျိုးသမီး အသင်းတို့ ကစားမယ့် အမျိုးသမီး စူပါလိဂ် ပွဲစဉ် ကတော့ ကိုဗစ် ပိုး ကူးစက်ခံရမှုကြောင့် ရွှေ့ဆိုင်း လိုက်တယ်လို့ သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
မန်စီးတီး အသင်းဟာ 3Key လို့ အမည်ရတဲ့ နည်းပညာ အဖွဲ့အစည်း တခု နဲ့ စပွန်ဆာ စာချုပ် ချုပ်ဆို နိုင်ခဲ့တယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။ အဆိုပါ 3Key Technologies ဟာ Crypto ငွေကြေးတွေကို စီမံခန့်ခွဲ လုပ်ဆောင် တဲ့ အဖွဲ့လို့လည်း သိရပါတယ် ။
ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေး မထိုးထားဘဲ သြစတြေးလျ နိုင်ငံ ထဲကို တင်းနစ် ပြိုင်ပွဲ ကစားဖို့ ဝင်ရောက် လာခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့ အဆင့် ၁ တင်းနစ် သမား ဂျိုကိုဗစ် ကို သြစတြေးလျ အစိုးရ က လက်မခံ ခဲ့တာကြောင့် အယူခံ ဝင်ခဲ့ရပြီး မဲလ်ဘုန်း ကို ပြန်သွားကာ ဟိုတယ် ကွာရန်တင်း ဝင်ခဲ့ရတယ်လို့ သတင်း ရရှိ ပါတယ် ။
ဒီလထဲမှာ ပေးအပ် ချီးမြှင့်မယ့် ဖီဖာ ရဲ့ ၂၀၂၁ အတွက် တနှစ်တာ အကောင်းဆုံး ဆုပေးပွဲ မှာ ပါဝင်တဲ့ Puskas Award ( တနှစ်တာ အကောင်းဆုံး သွင်းဂိုး ) ဆု အတွက် နောက်ဆုံး စကာတင် သွင်းဂိုး ၃ ဂိုးကို ယမန်နေ့ က ထုတ်ပြန် သွားခဲ့ ပါတယ် ။
အဲ့ဒိ အထဲ မှာ
(၁) စပါး တောင်ပံ ကစားသမား လာမယ်လာ ရဲ့ အာဆင်နယ် နဲ့ ပွဲက ရာဘွန်နာ သွင်းဂိုး
(၂) ချက် တိုက်စစ်မှူး ပက်ထရစ် ရှစ် ရဲ့ ယူရို ပြိုင်ပွဲ က ကွင်းတဝက် သွင်းဂိုး
(၃) ပေါ်တို ကစားသမား တာရီမီ ရဲ့ ချဲလ်ဆီး နဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ပွဲစဉ် က နောက်ပြန်ကန်ချက် တို့ ပါဝင်လာခဲ့ ကြတယ်လို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
ဖီဖာ ရဲ့ တနှစ်တာ အကောင်းဆုံး ဂိုးသမားဆု အတွက် နောက်ဆုံး စကာတင် စာရင်းမှာတော့ ချဲလ်ဆီး နဲ့ ဆီနီဂေါ ဂိုးသမား အက်ဒွာ မန်ဒီ ၊ အီတလီ နဲ့ PSG ဂိုးသမား ဒွန်နာရမ်မာ နဲ့ ဘိုင်ယန် နဲ့ ဂျာမနီ ဂိုးသမားကြီး နူအာ တို့ ပါဝင် လာခဲ့ ကြတယ်လို့ သတင်း ရရှိ ပါတယ် ခင်ဗျာ ။
Previous Article မက်ဆီ နဲ့ ရိုနယ်ဒို မပါတော့တဲ့ L’Equipe ရဲ့ ၂၀၂၁ အတွက် အကောင်းဆုံး အသင်း
Next Article ကော်တင်ဟို ကို ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ အက်စ်တွန် ဗီလာ